घाइते गाई ४८ घन्टादेखि सडकमा छट्पटाउँदै, सरोकारवाला तैँ चुप मै चुप - Karobar National Economic Daily
घाइते गाई ४८ घन्टादेखि सडकमा छट्पटाउँदै, सरोकारवाला तैँ चुप मै चुप
query_builderJanuary 17, 2017 12:45 PM supervisor_accountमनोरञ्जन शर्मा visibility5494
गाडीले हानेर घाइते भएको गाई सडकमा अलपत्र अवस्थामा । तस्बिर: मनोरञ्जन शर्मा
भैरहवाः आइतबार करिब ११ बजे आसपासको समयमा भैरहवा–बेलहिया सडकखण्डको बर्मेली टोल देबकोटा चोकस्थित श्रीकृष्ण नेत्रालय अगाडी बुटवलबाट तीव्र गतिमा आइरहेको सवारी साधनले एउटा गाईलाई ठक्कर दिएर घाइते बनायो ।
बिच सडकमा रहेको गाईलाई ठक्कर दिएर घसार्दै सडक छेउमा पुर्‍याइयो । गाई घाइते अवस्थामा छटपटाउदै थियो । कसैले मर्यो भने, कसैले होइन पुच्छर चलायो जिउँदै रहेछ भने ।
बाटो हिँड्ने बटुवाहरु छाडा गाईको बिगबिगी छ, कहिले के दुर्घटना, कहिले के भन्दै बाटो लागे । गाई घाइते भएको अहिले २४ घण्टा बितेको छ । यो बिचमा गाई जहाँको तहीँ छ ।
आज बिहान घटना भएको स्थानमा यो समाचारदाता पुग्दा गाईलाई चिसोबाट जोगाउन कसैले गुन्द्रीले छोपेर राखीदिएका रहेछन् । गाईले आखा पल्टाएर हेर्दै थियो, सायद औषधोपचारको आसमा थियो ।
बिचरा घाइते गाईलाई के थाहा, नजिकै पशु कार्यालय (करिब ६० मिटर अगाडी) रहेको छ । त्यहाँ ऊ जस्तै अन्य पशुहरुको उपचार हुने गर्छ । ४८ घण्टा बित्दा पशु कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू कतिपटक त्यो बाटो बाट ओहोरदोहोर गरे तर उनीहरूको ध्यान त्यता जान सकेन ।
बाटोमा घाइते भएको गाईको उद्धार गरी उपचार गर्ने ? अथवा अन्यत्र कतै सुरक्षित स्थानमा लगेर राखिदिने जिम्मेवारी कसको हो ? सम्बन्धित निकाय मौन छन् ।
ट्राफिक, नगरपालिका र सडक विभाग सबै मौन
सडकको दायाँबायाँ नो पार्किङ्ग लेखेको स्थानमा गाडी ,मोटरसाइकल रोेकेर राखेको देखे सिठ्ठी फुक्तै जरिबाना काटने र कारबाही गर्ने रुपन्देही जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले पनि घाइते गाईलाई पशु कार्यालयसम्म उपचारका लागि पुरयाउने काम गर्न सकेन ।
दुर्घटनामा मानिस घाइते भएको भए तत्कालै उपचारका लागि अस्पताल लगिन्थ्यो । तर बिचरा गाईलाई ट्राफिकले पनि देखेको नदेखेझै गरी ओहोर दोहोर गरिरहेछ ।
ट्राफिकले खाली सवारी साधनको व्यवस्थापन,कारबाही मात्र गर्ने हो र ?
सडकमा पशुचौपाया दुर्घटनामा परे नगरपालिका वा पशु कार्यालयमा खबर गर्ने जिम्मेवारी उसको पनि हो । पशु अधिकारको कुरा गर्ने अधिकारवादीहरु, हिन्दुबादीहरु पनि अहिले मौन छन् ।
सिद्धार्थनगरनगर पालिकाको आँखा त झन् अहिले विकास निर्माणमा भन्दा पनि कसरी कमाई हुन्छ भन्ने तर्फ मात्र रहेको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।
दुई दिनअघि भैरहवाको व्यस्त बजार बैंकरोड लगायत केही क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ्ग क्षेत्र भन्दै ठेकेदारमार्फत सवारी साधनहरुसँग पैसा उठाउँदै हिँड्यो ।
सडक छेउमा मोटरसाइकल कार, ट्याक्सी राखेमा कर उठाउने नगरपालिकाले राजमार्गको छेउमा एउटा गाई ४८ घन्टादेखि घाइते भएर छटपटाउँदै गरेको देखेको छैन ।
सडक निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम सडक विभागको हो । घाइते गाई भएको स्थान बेलहिया–बुटवल सडकखण्ड निर्माणधिन ६ लेन सडक खण्ड हो ।
सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक विभागले सडकका दायाँबायाँ प्रतिक्षालय, बिश्रामस्थल बनाउन निजी क्षेत्रलाई स्थान बेचेर रकम खाइसक्यो । तर सडकको छेउमा घाइते गाईको व्यवस्थापनमा चासो देखाएन । आज दिनभरमा उपचार नपाए त्यो गाई मर्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।